Ubuntu MATE 20.10 ufika nezalathi zeAyatana | Ubunlog
Ukuqhubeka nomjikelo wokumiliselwa kweGroovy Gorilla, kufuneka sithethe ngokufika komhlaba Ubuntu MATE 20.10. Njengabo bonke abazalwana benyanga ka-Okthobha u-2020, ifika neendaba, kodwa ingabalulekanga njengaleyo iphehlelele iinyanga ezintandathu ezidlulileyo okanye abo ibabandakanyayo Ubuntu Budgie 20.10, incasa ethe yazisa uluhlu olubanzi kolu khululo. Ukujonga Inqaku lokukhupha, siyabona ukuba utshintsho olucacisiweyo alutsali ingqalelo ingako.
Into yokuqala uMonica Madon kunye noMartin Wimpress, abatyikitye inowuthi, bayikhankanyile kukuba Ubuntu MATE 20.10 ufika noMATE 1.24.1. Kodwa, nangona bugs zilungisiwe kwaye imisebenzi emitsha yongezwe ukuthatha inxaxheba kolu phehlelelo, bakwasikhumbuza ukuba abo bafuna ukumiliselwa okukhuselekileyo, malunga nozinzo, kufuneka bahlale kwiFocal Fossa eyasungulwa ngoku kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo.
Amagqabantshintshi e-Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla
Ulawulo olusebenzayo okanye uLawulo olusebenzayo, into enokunxulunyaniswa nofakelo lwenkqubo yokusebenza.
Kukho utshintsho lwangaphakathi olubalulekileyo, ezizimpawu ze-Ayana. Ziyifolokhwe yeeflegi zoBuntu ezazenzelwe iGNOME 2.
Basebenzisa uArtica Greeter.
Itshizi ithathe indawo yeWebcamoid njengenkqubo yekhamera emiselweyo.
I-Raspberry Pi 4 inkxaso, kodwa umfanekiso uya kukhutshwa kwiintsuku ezimbalwa.
Izicelo zihlaziyiwe kwiinguqulelo zazo zamva nje, ezinje ngeFirefox 81, eza kuthi kungekudala ihlaziywe kwi-v82, LibreOffice 7.0.2, Evolution 3.38 kunye neCelluloid 0.18.
IBlueZ 5.55, ethi, eyongezwe kwimibala ye-kernel, ilungisa isiphoso sokhuseleko seBluetooth esaziwa ngokuba yiBleedingTooth.
Ubuntu MATE 20.10 Groovy Gorilla ngoku iyafumaneka ukusuka kwiwebhusayithi yomphuhlisi, esinokufikelela kuyo esi sixhobo. Abasebenzisi abakhoyo bangaphucula basebenzise umyalelo "sudo do-release-upgrade -d" ngaphandle kwezicatshulwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » Ezinye iidesika » Ubuntu MATE 20.10 ufika nezalathi zeAyatana, isikhombisi esisebenzayo kunye nezinye iindaba